Iyo nyowani yeMintBox Mini 2 ikozvino yave kuwanikwa yekutengesa-kusati kwasvika | Linux Vakapindwa muropa
Ya iyo nyowani vhezheni yehomwe komputa inowanikwa pre-odha iyo ine iyo Linux Mint inoshanda sisitimu yakagara yaiswa, iyo MintBox Mini 2 iyo ichauya neLinux Mint 19. Iyi MintBox Mini 2 yakabata ruoko yakaziviswa munaKurume sechibatiso chirongwa pakati peCompuLab neLinux Mint.
Iye zvino ichi chidiki cheLinux PC chiripo chekutanga-kutengeswa, zvichiratidza kuti iri pedyo Linux Mint 19 "Tara" kuburitswa ichauyawo nayo.
El mintBox Mini 2 inogadzirwa neCompuLab yeIsrael mavambo, uye ndeimwe yemagadzirirwo ake asina fanika, iyo ino ficha inowanzo kuve imwe yezvakanakisa zveiyi komputa.
Pane rako peji peji chirevo chinotevera pamusoro penyaya iyi:
Kunyangwe kuita kwepamusoro uye simba rakafanana rekushandisa, MBM2 inomhanya zvakanyanya kutonhodza pane yakatangira iyo nekuda kweiyo nyowani nyowani yekupisa dhizaini ine hombe kudziya pamusoro, iri nani tembiricha yekubatanidza, uye yakasarudzika conductor kutonhora kweiyo mudziyo wekuchengetedza.
1 Zvimiro zveMintbox Mini 2
Zvimiro zveMintbox Mini 2
Kuenzaniswa nechizvarwa chekutanga Mintbox Mini, iyo nyowani Mintbox Mini 2 Iyo ine maviri-bhendi maantena, maviri USB 3.0 madoko, microSD slot, odhiyo macomputer uye micro, uye Kensington kukiya iyo yave kuwanikwa kurudyi kurudyi.
Ma LED maviri akarongeka aripowo kumberi. Kumashure, iyo nyowani Mintbox Mini 2 inopa maviri USB 2.0 madoko, maviri maGigabit Ethernet madoko, imwe RS232 serial port, pamwe neHDMI 1.4 chiteshi (4K pa30Hz) uye mini-DP 1.2 (4K pa60Hz) yeiri nani screen yekubatanidza.
Iyo nyowani MintBox Mini 2 yakavakirwa pane Intel Celeron J3455 Apollo Lake SoC ine Intel HD Graphics 500 mifananidzo kadhi izvo zvinoitika kutsiva iyo AMD A4 6400T CPU (64-bit, quad-core, 1GHz) yaive neakautangira.
Kutenda kune yakasanganiswa Intel HD Graphics 500 yakabatanidzwa muCeleron processor, tinogona kuwana mukombuta iyi diki Mini DisplayPort chiteshi kuwedzera kune yakajairwa HDMI, iyo inotibvumidza kubatanidza iyo yekuwedzera tarisisa.
Uyewo, inopa 4GB kana 8GB ye RAM (inosimudzira kusvika 16GB) Kusiyana neiyo yapfuura vhezheni ye4GB ye RAM uye M.2 SSD yekuchengetedza, inouya neLinux Mint 19 uye CompuLab inotsigira iyo hardware iine makore mashanu garandi.
Iyo Mintbox Mini 2 Pro vhezheni inowanikwawo, iine 120GB SSD uye 8GB ye RAM. Ese ari maviri Mintbox Mini 2 uye Mintbox Mini 2 Pro chikepe neLinux Mint 19 uye izvozvi zviripo zvekutengwa pasirese.
Kusiya iyo Hardware chikamu uye kupinda mune software nyaya, yakajairwa sisitimu yekushandisa ichave iri nyowani Linux Mint 19 "Tara" Cinnamon edition pamwe neayo ese ekurongedza ayo anowanzo sanganisira.
Pakupedzisira, Linux Mint projekiti mutungamiri anogovera zvinotevera:
“MBM2 chikamu chakanakisa. Idiki, yakanyarara, uye yakazara nekubatana. Iko kunakidzwa chaiko kwatiri kumhanyisa yedu yekushandisa system mubhokisi diki rakatsvinda kudaro.
MBM2 ndicho chigadzirwa chazvino chekudyidzana kwedu neCompulab, yatakavaka hukama hwakasimba naye kubvira 2012.
Itsva Mintbox Mini 2 ine kukosha kwe $ 299 uye iyo Mintbox Mini 2 Pro $ 349. Unogona kutenga chero eaya mamodheru uye udzidze zvakawanda nezve iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Nenzira yega Ini ndinogona kuwedzera kuti ini handibvumirane nepfungwa yekuti komputa haisanganisi sosi yemhepo, sezvo zvese zvigadzirwa zvemagetsi zvinoda kubvisa zvese zvekuwedzera tembiricha.
Asi sekutaura kwandinongoita kungotaura wega, pakupera kwezuva ivo mainjiniya uye vanogadzira, ivo vanoziva dhizaini uye nei vasingasanganisi izvi.
Kunze kweizvozvo vanopfuura mumwe vanofunga kuti mitengo inouya neiyi mitsva kuburitswa chimwe chinhu chaunogona kuwana komputa ine mharidzo dziri nani.
Asi kupihwa hunhu hwechikwata chekuve mumwe wevashoma neLinux pre-yakaiswa uye chokwadi chekushingairira kuve minicomputer chinoita kuti chinakidze.
Ivo vanofanirwa kuziva kuti chikamu chemutengo wekombuta unoenda wakananga mukuvandudza kwekugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani MintBox Mini 2 ikozvino yave kuwanikwa yekutengesa-pre
Ichokwadi chinodhura processor yeCeleron inova ndiyo yakaipa kwazvo. Izvo zvakare kubva kuIsrael inotyora kodzero dzevanhu. Ndine urombo, ini ndinogara ndichitsigira mapurojekiti eLinux, asi panguva ino zvakaitika.
Nekuremekedza kwakakodzera, maonero ako pamagumo echinyorwa chasara. Ivo ndivo mahunyanzvi uye iyo kambani inoshanda chaizvo mukugadzirwa uye kugadzirwa kwemaminicomputer. Ivo vanopa 5-gore vimbiso yechigadzirwa chavo, hapana mugadziri munyika anozviita (1 gore rakanyanya, rinotambanudzwa kusvika ku3 zvinoenderana nemutengesi), iko kubudirira kweinjiniya.
Kuenzanisa kwaro kwehupfumi kuri kunze kwechimiro, icho chigadzirwa chine yekucheka-kumucheto dhizaini uye yakanaka kwazvo yekubatanidza iyo inogona kutorwa chero kupi nePC / Notebook maficha uye kuti kusvika zvino yapinda mumusika, zvakafanira kuti utambure kubva kune wega- yekusimudzira munyonga. Nekudaro, inokwikwidza kwazvo neakanaka maficha evashandisi vanoda kugadzirwa pabasa kana zvidzidzo, zvirokwazvo kwete zvekutamba, mune izvo zviitiko iwe unofanirwa kushandisa zviteshi zvakagadzirwa nechinangwa icho senge vhidhiyo yemitambo yekunyaradza. Kutamba pakombuta izana ramakore rapfuura uye yechinyakare.
Iyo 100% inoenderana neGNU / Linux, iyo inodzivirira iyo generic dambudziko reusina kutsigirwa Hardware pakutenga makomputa neWindows pre-yakaiswa. Ndiyo San Benito yemaforamu uye zvichemo.
Pachezvangu, ramangwana reGNU / Linux dzimba dzekupedzisira rasvika, zvigadzirwa zvekugadzira neazvino tekinoroji uye yekubatanidza uye neGNU / Linux pre-yakaiswa. Bhodhoro rakakura rakafumurwa panguva iyoyo neakare-gnome Miguel de Icaza uye izvozvi raigona kuve danho rekutanga kusabvumirana naye.
Mazvita, ndinotenda chirevo chenyu, asi sekutaura kwangu ingoriwo maonero emunhu.
Yakawanda yekukurudzira buzz asi ini ndinobvumirana 100% nekwaMiguel kwekutanga kutaura kuti ivo Celeron ihama Shalem crap. Kubatana kwakanaka uye zvichingodaro uye zvichingodaro, asi iyo mike yakachipa crap.
Kana ini ndichibvumirana nepfungwa yeiyo micro, kune yangu chikamu ndinoda AMD zvakanyanya uyezve kune vanhu vanozoona iyi komputa sechinhu chinopenga maringe nemutengo uye hunhu.
Asi kune vamwe vanhu vanoona mumhando iyi yekomputa chishandiso chebasa chavanogona kushandisa.
AV Linux, ikozvino nerutsigiro zvirinani rwe AMD vhidhiyo makadhi